It is me. Ko Niknayman.: သြော် - မလွတ်လပ်မှုများ၊ ဘုရားဖူးတာတောင် မှတ်ပုံတင်မပါရင် ဒုက္ခရောက်မယ့်သဘောဘဲ။ ခက်ပါဘိ။
Posted by Ko Niknayman at 12:54 PM